Oromoo gaafa abba biyya ture Ogannoon isaa yeeroo dheera dubartoota akka turan seena ibsu heedutu jijra. Oromoon umaman kabaja dubartiif qaba. Dubartiin Haadha, Ilimoodha, Haadha manati, Obbooleeti dha, utuba manati jeedhee kabaja. Dhiiri dubarti hin haamatuu, hin xiqeesuu. Malaqa fi Sanyii ilee dubartituu ol ka’aa, waan dubarti birra ga’eetu kan maatiti jeedhama.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Siirna Gadaa kessati dubartoon Oromoo kabaja fi ga’ee hin qaban dhaalla hin argatan jeechuun siirni Gadaa democracy Oromoo UNESCOti akka hin galmofne goochun isaa heedu nama gadisisa. Dubartiin mana abba isheeti dhaala hin argatuu kan jeedhameef bakka itti heermtuu irra dhaalla waan argatuuf. UNESCO amansisuuf ragga kumatama wayee siirna Gadaa fi kabaja dubartootaf qabnuu ibsuuf ni dandama. Dubartin wara shee irra dhaala yoo argate bakka heerumtee irra ilee dhaalla yoo argatee kara lama waan ta’uuf dhiiri ni midhama jeedhame siirti iti yadameti. Kara bira amoo yoo ilaale Oromoo keessati dubartiin angoo fi qabeenya kan qooduu malee kan qoodamtuuf hin ture. Oromoon bara biyya Kusha bulcha ture yeero bayeef oganni isaa dubatoota ture.
Dr. Fikre Tolesa wagoota 2000 fi 3000 dura Ethiopiati kasee hanga Egypt -, Libiya, Tusnsa fi Portugalti dubartoota Oromoo bulacha tura jeechun qooranno yeeroo dhera adeemsise raga dhiyesa ture. Erga Mootuumman kusha kufe Habashan angoo qabatee iyuu tanan kara abba mana isaan biyya kan bulcha turan dubartoota Oromoo akka Xayitu Buxul faa heedu caqasun bareese jira. Mootummaa Kusha keessati ta’ee ergasi hoji biyya gegesuu keessati ga’ee ykn qoodi dubartoota Oromoo hunda Ol ta’uu isaa ragga heedutuu jira.
Oromoon Amanta Araba fi Faranj utuu hin tanee waqeefanati amana waan turef dhiiban amanta dubarti Oromoo irra hin ture, Europa keessati dubartiin mirga argatee Paarlamaati iyuu filamuu kan dandeese bara 50 hin caaluu, Oromoon garuu Warqituu fi Mastawat faan biyya bulcha kan turan wagaa 200 dura. Warqitu fi Mastawat walii isaan gidutu waldhabdee hajiratuu malee uumata bulcha turanf heedu kabaja fi jalala akka qaban ilee ragan galma’ee jira.
Isaa yeeroo fagoo dhifne isaa dhiyoo yoo xinxalee ilaalee dubartoon Oromoo qabsoo ama goodhama jiruu keessati ga’een isaan fi muranno isaan heeduu kan nama boonsuu ta’ee argama. Qabsoo dire ABO gegesa ture keessati shamaran Oromoo lola fi Ogansa keessati cimmoo fi amanamoo ta’uu isaanin beekamuu. Hoji tikka fi basasa keessati ilee hoji bonsa akka hojeetanf yoomi ilee qabsoo diinati dabarsan kan hin gurgure ta’uu isaati. Lixa Oromiyaa fi baha Oromiyaa keessati Qabsoo hidhannoo ABO gegesa ture irrati shamaran Oromoo ga’ee isaan gumacha turan siirti qooratamee utuu ibsame shamaran Oromoo booriif fakeenya garii ta’aa ture.
Fincila uumani Oromoo gegesa jiru keessati Hirmanan Shamaran Oromoo heeduu nama boonsa keesumati FXG bara 2014, 2015, fi 2016 ama gegefama jiruu irrati xinxalii nu goone kan mulsuu hirmanan dubartoota (haadhoota) Oromoo olana ture. Kan kan jeenuu caliifnee miti, maqa isaan siirti beekuu dhifnuu ilee hirmanan fi wareegama dubartoon Oromoo kafala jirantuu Olana ta’ee mulata waan jiruuf.
1. Jartoolin umurin isaa hanga 80 ga’uu hirira irrati hirmachuun Jaldu, Gindabarat, Ambo fi Walisoo irrati hamilee dargagoota jabessa akka turan videon argane jira,
2. Daa’imi Umurii xinnoo madofte fi dutee ilee dubartii dha.
3. Nami uumrii dheera wareegamte ilee Barsiftuu Jartii waga 74 dubarti dha;
4. Fincila Hararge magaala hunda keessati gegefama jiru Masala, Dadar, Hirna, Haromaya, kkf hunda irrati FXG Video isaa yoo ilalatan shamaran Oromootuu dursee diina dura dhabacha jira.
5. Mana Hidha wayyane keessati dararama gudaa kan irra ga’aa jiruu ilee durba Oromooti Fakeenya Nadjo keessati waraan TPLF ijoolee durba FXG irrati hirmatan hunda mana tokkoti naqee irrati sagagalun yakka hama rawwata jira.
6. Shamaran Oromoo university hunda keessati ijoolee dhirra dursun hamilee lacha akka jiran gaafi fi deebi baratootaf goonee irra henbane jira.
Biyya keessa qoof utuu hin tanee diaspora biyya ala jiran keessati ilee dubartoon Oromoo Embassy Wayyane Harka latan hin beekan. Qabsoo Oromoo gurguran hin beekan Ilfnesh Qannoo erga gaafa argineti qabsoo irra boodeti deebitee hin beektuu, Asili Oromoo murteen du’aa hamilee ishee hin ajeefne. Dhiiri ga'ee qabsoo keessati hin qabuu jeechuu utuu hin tanee durse qabsoo ganuu, diinaf hojeechuu, kayyooti cicichuu dhisee Habasha kaleessa balalefacha ture hara amoo Habasha jala isaa adeemuu argina. Dubartoon amala akkasi hin qaban. Kan kara irra barganfatee dhabatee nu rakkisuu dhiira Oromooti, kan ganda fi amanta jala adeemuu fi embassy diina waliin dhichisee nu rakkise dirra oromooti. Diaspora keessa dubartoon Europa, USA, Kanada fi Australia lammi Oromoo biyya keessa degeruuf gumachi isaan goocha jira heedu gudadha. Dhiiri Oromoo Mana Paltak keessa galee yeeroo nama haamatuu fi wayee diingamu Oromoo dhadeesuu, dubartooni Oromoo tokkuma irrati yeeroo falmatan argina.
Haraaf kan ittin golabuu barbanuu Oromoo Oromoo Bilisomee fi Oromiyaa walaboomtee arguu yoo barbadee Muratoota shamaran Oromoo angeesuu qaba. Hoji hunda keessati dubartoon akka hirmatan goochuu qaba. Keesumati hoji tikka dubartoota Oromoof caalati keenamuu qaba sababin isaan Qabsoo hin gurguran. Kara lama nyachuu hin beekan yoo sodatan ni dhisuu yoo murtefatan ni du’uu malee of hin guguran. Dubartoota Oromoo dandeeti isaan siirti qoorachuun akka isaa honi ogansa irrati gudatanfi amumaa qabsooti dabaluu qabna malee akke meshati ilaala yoo ta’uu himana UNSCOn nu irrati dhiyeese sun raga of ba’uu dha.
Itti Fufa !!
Link Suura FXG:- Hirmana dubartoota